Sawirro: Axmed Madoobe oo Nairobi ka wada abaabul siyaasadeed + Ujeedkiisa - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Axmed Madoobe oo Nairobi ka wada abaabul siyaasadeed + Ujeedkiisa
Sawirro: Axmed Madoobe oo Nairobi ka wada abaabul siyaasadeed + Ujeedkiisa
Nairobi (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe)ayaa casho sharaf u sameeyey Gudiga madaxa banaan ee Dastuurka Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Gudiga la socodka dib u eegista Dastuurka ee labada aqal ee golaha shacabka Soomaaliyeed oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Axmed Madoobe Madaxweyne, ayaa labada gudi kula dardaarmey in la dardar galiyo dhameystirka Dastuurka sidoo kalena laga feejignaado in Dastuurka la xado ama dano gaar ah lagu saleeyo dhameystirkiisa.
Sida Caasimadda online ay u xaqiijiyeen ka qeeybgalayaal kullankaasi Waxaa uu Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ku wargliyay masuuliyiinta uu la kulmay in Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaarahu wadaan Burburin Maamul Goboleedyada waxuuna ugu baaqay in ay Go’aan ka gaaraan.
Xalay ayay aheyd Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu sidoo kale la kulmay Xildhibaanada Soomaalida ah ee ka tirsan Baarlamaanka Kenya.
Waxaa hadda Abaabulka ugu weeyn ee ka dhanka ah dowladda Farmaajo uu ka socdaa Magaalada Nairobi, waxaana xoogiia wado Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dareemayo ciriiri siyaasadeed iyo inuu halis ku jiro Xilkiisa Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa waxaa ku kacsan qaar badan ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeedo deegaanadaas, waxaana dhawaan la abuuray gole lagus sheegay inuu xoreyn doono Maamulka Jubblanad oo la sheegay inuu gumeysi ku jiro.
Axmed Madoobe ayaa lagu eedeeyey inuu yahay kaligii taliye xoog ku heysto Maamulkaas, isagoona dhawr jeer cadaadis saaray xildhibaano ka hor yimid qorshaha maamul ee uu ku wado Maamulka Jubbalanad.